Global Voices teny Malagasy · 19 Febroary 2009
19 Febroary 2009
Tantara tamin'ny 19 Febroary 2009
Shina19 Febroary 2009
Albania19 Febroary 2009
Namoaka ny tahirin-kevitra “An’iza ity hira ity” ny mpitoraka bolongana maro Masedonina tamin’ny alalan’ny Bulgariana iray Talen’ny Adela Peeva izay ao amin’ny blaogin’izy ireo ihany ary nanomboka niresaka ity tantara ry zareo. Nalaina horonantsary io tahirim-pahalalana io ho fitarihan-kevitra ka ity talen’ny Adela Peeva ity no nahita izany nandritra ny...
Broney19 Febroary 2009
Nitohy tsy nijanona sy nanampoka ny maro ilay ora-mikija tsy ela akory izay. Nitarika fahatapahan’ny herinaratra, tondra-drano sy fihotsahan’ny tany izy io. Maro ireo toerana ambanivohitra no tsy azo aleha noho ny fiakaran’ny rano
Azia Atsimo19 Febroary 2009
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana19 Febroary 2009
Voarakotra tafio-drivotra goavana ny sakeli-tany arabo manontolo, mahatonga ny vahoaka any Bahrain, tao Kuwait, tao Arabia Saodita, Yemen, Iraq ary ny firaisan’ny Arabo entin’ny Emir (United Arab Emirates) hiaina anaty rivo-manempotra. Ireo ny horonantsary, sary sy bolongana nampidirina mahakasika ny toetr'andro mahatsiravina izay tsy fahita amin'ny vanim-potoana toy izao ao...
Guadeloupe : Nihanafana ny toe-draharaha ka niafara tamin'ny herisetra
Karaiba19 Febroary 2009
Taorian'ny herinandro nanaovana fitakiana tamim-pilaminana tany amin'ireo departemanta Frantsay any Guadelope dia nivadika ho herisetra izany ny alatsinainy lasa teo raha nifandona tamin'ny mpitandro ny filaminana ireo mpanao fihetsiketsehana tany Point-à-Pitre. Toherin'ny mpiasa mantsy ny fitomboan'isa tsy an-kijanona ireo tsy an'asa sy ny fiakaram-bidin'ny zavatra ilaina andavanandro izay afarana avy...